Kala beddelashada Xogta laga Acer in macruufka Devices
Mase ka hore telefoonada gacanta casriga ah oo cusub oo dhalaalaya u muuqataa sidii fikrad xiiso. Iyada oo reyn u dhaqaaqo qalab cusub ayaa sidoo kale daunts soo xiro dadka of wareejinta xogta weyn oo uu soo ururtay in aad telefoon jir muddo ka. Waa eego fudud si ay u gudbiyaan xogta marka aad qorshaynayso inaad kala bedesho qalabka shaqeeya hal madal ay. Si kastaba ha ahaatee, waa duwantahay in ay u guuraan xogta marka dhufto ee waa kala duwan.
Xaaladdan ayaa qorsheyneysa in aad iska beddelaan telefoonka Acer in qalab macruufka ah, waxaa laga yaabaa in aad raacdo mid ka mid ah wadooyinka laga heli karaa dad badan si ay u gudbiyaan xogta. Laakiin iyada oo aan qalab sax ah oo hab sax ah, waxaad la kulmi kartaa dhibaatooyin yar inta lagu jiro hanaanka wareejinta xogta.
Arrimaha ugu weyn ee ah in aad la kulmi kartaa halka xogta ka Acer wareejinta in qalab kasta oo macruufka la isticmaalayo habab qadiimo waa:
• Habka wareejinta xogta iyadoo ka dhigeysa PC sida dhexaadiyayaal ah waa waqti lumis iyo arxan daal.
• Waxaa loo baahan yahay in aad mari hawsha galayo ee isku xira il iyo caga qalabka si aad PC mid waqti.
• aanu Habka jir ogolaanayso in aad si ay u gudbiyaan xogta lagu kaydiyaa xasuusta gudaha ah qalab aad sida farriimaha qoraalka ah iyo xiriirada.
• Si aad u wareejin xiriirrada, taas oo ah mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee xog ururinta aad, waxaa looga baahan yahay inay raacaan kala duwan, halkii dheer, wadada wadajir.
• Sababo la xiriira hawlgalka hababka kala duwan ee qalabka aad, aad la kulmi karto arrinta waafaqid iyadoo isku dayaysa inay ku wareejin sawirada, e-buugaagta, iyo faylasha kale ee warbaahinta.
Si looga fogaado (ama la yaabka lahaa yareeyo) dhibaatooyinka ka wada hadleen kor ku xusan in aad la kulmi kartid halka wareejinta xogta, waxaad kala soo bixi kartaa qalab dhinac saddexaad ku ool ah. Maqaalkani waxa ay higsaneysaa in ay aad u soo bandhigo in ay codsi software la yaab leh u wareejinta xogta aad u dhexeeya laba casriga ah, iyadoo aan loo eegin madal, hab fudud, oo nabad iyo xasilooni.
Xogta laga Acer wareejiyo Device macruufka ah ee One-Click
Si loo sameeyo hawsha xogta weyn ka qalab jir wareejinta ilmo ee ciyaarta, waxaad qaadan kartaa magan software wax ku ool ah oo cusub oo loo magacaabay MobileTrans soo bandhigay by Wondershare. Wondershare MobileTrans waa mid ka mid ah danabka badan software mobile ka Wondershare (mid ka mid ah horumarinta wax soo saarka ugu weyn ee software macaamiisha kala duwan).
MobileTrans 'Interface oo quruxsan oo wanaagsan loo soo abaabulay wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u arkaan casriga ah ee aad ku xiran-waqtiga dhabta ah shaashadda, oo aad Socon dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si ay u gudbiyaan xogta aad. Codsiga waa user-friendly oo uusan haysan qalooca uga yaacday ilaa waxbarasho.
Haddii aad rabto in aad si ay u gudbiyaan xogta ka Acer in qalab macruufka ah, Wondershare MobileTrans yahay xalka lagu talinayaa in aad u. Ayaa tallaabo-tallaabo tilmaamaha isticmaalka Wondershare MobileTrans la siiyaa hoos ku qoran in aad raacdo si ay u dhammaystiraan geedi socodka iibsiga xogta.
MobilTrans Wondershare gelineya inaad si ay u gudbiyaan waxyaabaha u dhexeeya casriga ah in ay ka shaqeeyaan dhufto ee Android, macruufka, WinPhone ama Symbian in click hal. Iyaga oo taageero ka badan 3000 oo lagu daydo telefoonka, waxaad si fudud u wareejin karaan farriimaha qoraalka ah, xiriirada, barnaamijyadooda, files warbaahinta iyo sawirada la isticmaalayo MobileTrans.
Tallaabada 01: Download Wondershare MobileTrans aad kombuutarka.
1.Download version saxda ah ee Wondershare MobileTrans sida nidaamka qalliinka lagu rakibay aad PC:
Tallaabada 02: Ku rakib iyo abuurtaan software ka soo bixi.
1. Marka bixi, double-riix faylka eedeysanuhu codsiga ka desktop-ka.
2. Raac tilmaamaha ku-shaashadda si ay u dhammaystiraan geedi socodka rakibo.
3. Ka dib markii MobileTrans waxaa si guul leh ku rakiban aad kombuutarka, riix Start Hadda button on suuqa kala furay in aan bilowno software ah.
Tallaabada 03: Connect labada qalabka si aad PC.
1. Marka codsiga la bilaabay iyo interface ka muuqataa, riix badhanka Start ka hoose ee ka Phone inay kala iibsiga Phone qaybta.
2. Isticmaalka fiilooyinka USB kala, xirmaan casriga ah si aad PC.
3. Si loo hubiyo in qalabka waxaa loo aqoonsaday by barnaamijka, raadi cagaaran xiran badhanka hoose oo labada walxood smartphone on interface ka.
4. Sidoo kale in la hubiyo in ay Acer iyo qalab macruufka ah waxaa lagu soo bandhigay hoos Source iyo meel loo ahaadana iyadaa qaybaha ay u kala horreeyaan.
Fiiro gaar ah : Haddii ay dhacdo in casriga ah ee aan la soo bandhigay qaybaha ku haboon, riix Flip button ka dhexeeya labada qaybood si sax ah u dhig.
Tallaabada 04: wareejinta xogta ka Acer in qalab macruufka ah.
1. Marka ay keentay in si loo soo dajiyo Lugood aad kombuutarka, in kiiska aadan haysan Lugood horay aad kombuutarka, dhammaystiraan geedi socodka rakibo adigoo raacaya tilmaamaha ku-shaashadda.
Fiiro gaar ah : Haddii aad horey u Lugood rakibay aad kombuutarka, aad iska indho tirin karo waano ah.
2. Optionally, ka fiiri macluumaadka oo cad ka hor inta nuqul checkbox hoos ku meel loo ahaadana iyadaa qaybta, haddii aad rabto in aad masixi kasta oo macluumaadka lagu kaydiyo hore aad qalab macruufka ah.
3. Laga bilaabo noocyada xogta transferrable ku qoran ee Select content in aad nuqulka sanduuqa dhexeeya Source iyo meel loo ahaadana iyadaa qaybood, hubi checkboxes matalaya xogta in aad rabto in lagu wareejiyo.
4. Ugu dambayntii riix Start nuqul ka button hoos ku Select content in aad nuqulka sanduuqa aad u bilowdo nidaamka kala iibsiga.
5. Sug ilaa Wondershare MobileTrans ku wareejinaya faylasha loo doortay in ay aad qalab macruufka ah.
Fiiro gaar ah : Waxaad carqalad ku keeni karaan hanaanka wareejinta mar kasta adigoo riixaya Cancel button ka geeska midig hoose ee suuqa kala iibsiga ka.
6. Marka dhammaan faylasha aad la doortay waxaa loo wareejiyay qalab macruufka ah, riix OK button ka sanduuqa popup ah.
Wondershare MobileTrans Waa barnaamij anfacaya oo bixiya in kuwa doonaya in ay u gudbiyaan xogta u dhexeeya casriga ah adeeg tayo leh. Software kasbada user ratings ugu sarreeya ka mid ah tartanka kala duwan oo ay sabab u tahay oo quruxsan, la yaab leh, muuqaalada user-friendly, oo si sahlan loo isticmaalo.
Sida loo kala iibsiga xogta u dhaxaysa macruufka Qalabka (ka macruufka in macruufka)
> Resource > macruufka > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Acer in macruufka Devices